သင့်ရဲ့နေအိမ်မှာပဲ ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အနားယူနိုင်မယ့်နေရာလေးတစ်ခုကို သင်ပိုင်ဆိုင်ရမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပင်ပန်းနေတဲ့အခါ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပြီး ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖြေလျှော့ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ တချို့က spa သို့သွားကာပင်ပန်းသမျှကိုဖြေဖျောက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမြဲလိုလို spa သို့သွားခြင်းက သင့်ရဲ့အသုံးစ ရိတ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နေအိမ်မှာပဲ ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အလားတူစွာ အနားယူနိုင်မယ့်နေရာလေးတစ်ခုကို သင်ပိုင်ဆိုင်ရမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ကတော့ - ၁. သင်အနားယူမည့်နေရာကို အရောင်နုနုလေးများဖြင့် ခြယ်သလိုက်ပါ။ အရောင်နု၊အရောင်ဖျော့တွေဟာ သဘာဝနဲ့နီးစပ် တဲ့အတွက် သင့်စိတ် ကိုကြည်နူးစေပါတယ်။ ၂. သင်အနားယူမည့်နေရာဟာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ၊ မီးဖိုချောင်နဲ့ နီးတဲ့နေရာမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရနံ့တွေ၊ အမွှေးခဲတွေထားရှိ ထားသင့်ပါတယ်။နှင်းဆီရနံ့၊ သစ်ခွပန်းရနံ့စတာတွေဟာ အနား ယူခြင်း အတွက် သင့်တော်တဲ့ရနံ့တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃.အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေဟာ နေ့စဉ်တိုင်းလိုလိုသင့်အနီးမှာရှိနေ တာဖြစ်ပါတယ်။ သင်အနားယူတဲ့အချိန်မှာတော့ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ၊ ဂိမ်းတွေရှိမနေစေဘဲ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ် ကူးတွေနဲ့သာငြိမ်သက်စွာ အနားယူသင့်ပါတယ်။ ၄. သစ်ပင်ပန်းပင်တွေဟာ သဘာဝတရားကို သင့်ရဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့ အခန်းလေးဆီကိုခေါ်ဆောင်လာနိုင်ပြီး လေကိုသန့်စင် စေတဲ့အတွက် သစ်ပင်ပန်းပင်လေးတွေထားရှိဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။ ၅. တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ဟာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် အနားယူတဲ့အချိန်မှာ မီးအလင်းရောင်ကိုလည်း မှိန်ပြပြလေးထားရှိ သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာစစ်မှန်တဲ့အနားယူခြင်းကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit # http://bit.ly/29g4Nqm
SCG Smartwood အရိပ်ပေးသစ်သားပြား - 2.97 inx 9.84 ft x12 mm. - မူလသစ်ခံအရောင်